“Muqdisho caasimad Somaliyed mar waa ahayd; Xabbad, madfac, dil, doox & barakac ayaa Xamar imminka u gaar ah.” Garaad C/llahi Cali Ciid. – Radio Daljir
“Muqdisho caasimad Somaliyed mar waa ahayd; Xabbad, madfac, dil, doox & barakac ayaa Xamar imminka u gaar ah.” Garaad C/llahi Cali Ciid.
Febraayo 17, 2011 12:00 b 0
Garowe, Feb 17 – Garaad C/llaahi Cali Ciid, afhayeenka Issimada Puntland oo ka hadlay doodda ku saabsan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Xamar ay mar ahayd caasimada Somaliyeed, balse nasiib darro hadda aanay lahayn muuq iyo muunad caasimadeed. Garaadku waxaa uu intaas ku daray in 20-kii sano ee la soo dhaafay Xamar ay ahayd meel xabbad, madfac, barakac, dil, doox iyo barakac ay u gaar ahaayeen.
Garaadku waxaa uu sheegay in caasimadu ay tahay wax lagu heshiiyo, haddii loo baahdana la wareejin karo, iyada oo la tixgelinayo duruufaha markaa jira.
Waxaa uu intaas ku daray in caasimad noqoshada Xamar, ama magaalo kale oo Somaliya ka mid ahi, ay tahay mid talo iyo heshiis ku imaan karta.
Garaadku waxaa uu tilmaamay in Muqdisho la qabyaaladeeyey, laga dhigay magaalo reer leeyahay, aanan lagu tilmaami karin in ay tahay caasimad Somaliyeed. Waxaa uu daliil u soo qaatay dhismaha maamulka Xamar oo uu sheegay in ay ahayd in uu ka koobnaado 18-ka gobol ee Somaliya.
Doodda ayaa ka dhalatay xog ka soo baxday dawlada Puntland oo dhigaysay in Puntland aanay u aqoonsanayn Xamar in ay hadda tahay caasimad Somaliyed, balse ay mar ahaan jirtay.
Duqa magaalada Muqdisho oo arinta ka hadlay ayaa sheegay in Xamar Alle ka dhigay caasimad, weligeedna ay ahaan doonto, cid ay ka baryaysaana aanay jirin.